आजबाट ८.५५ एनआईसी एशिया डिबेञ्चर २०८७ को बिक्रि खुल्ला, कति पाइन्छ ब्याज ? - Arthasansar
आजबाट ८.५५ एनआईसी एशिया डिबेञ्चर २०८७ को बिक्रि खुल्ला, कति पाइन्छ ब्याज ?
आइतबार, ०६ असार २०७८, ०७ : ४१ मा प्रकाशित
आज असार ६ बाट एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रि खुल्ला गर्ने भएको छ ।
बैंकको उक्त ऋणपत्रको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ ।
ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाइ र अधिकतममा १५ लाख इकाइसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्र छिटोमा असार ९ गते र ढिलोमा असार २० गते बैंकिङ समयसम्म बिक्रीमा रहने ।
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट जेठ २० गते अनुमति पाएको छ ।